Soo dejisan F-Secure Internet Security 17.7 – Vessoft
WindowsAmnigaDifaac guudF-Secure Internet Security
Bogga rasmiga ah: F-Secure Internet Security
F-Secure Internet Security – ah antivirus si aad u ilaaliso kombiyuutarka oo aad siiso shabakad amaan ah. Software wuxuu kormeerayaa habdhaqanka codsiyada la rakibay si loo xakameeyo isku dayga aan la oggolayn ee isku xirka internetka iyo galaan isbeddel khatar ah nidaamka. F-Secure Internet Security wuxuu bixiyaa shabakad nabadgelyo leh oo internetka ah iyada oo la xakamaynayo boggaga internetka ee xaasidnimada ah iyo xaddidida helitaanka khadka internetka oo leh shaki ku jiro ama mamnuuc ah. Amniga Internetka ee F-Sec waa inuu hagaajiyaa difaaca shabakada isaga oo ka hortagaya in la soo rogo faylasha khatarta ah ee internetka, oo loogu talagalay ka faa’iidaysiga jilicsanaanta nidaamka. Antivirus waxay si toos ah u dhaqaajisaa ilaalinta dhaqdhaqaaqa lacageed markaad booqanayso shabakadaha bangiga, taas oo xannibaysa dhammaan isku xirka shabakada, marka laga reebo taas loo isticmaalo lacag-bixinta. F-Sec secure Internet Security wuxuu taageertaa nidaamka xakameynta waalidka si loo dejiyo xadka xadidan oo xannibaya waxyaabaha aan la rabin internetka.
In la xakameeyo bogagga xaasidnimada ah iyo kuwa laga shakiyo
Tiknoolajiyada difaaca ee horey u socota
Ka mamnuucista faylasha xaasidnimo
Ilaalinta dhaqaalaha macaamilka
Soo dejisan F-Secure Internet Security
Faallo ku saabsan F-Secure Internet Security
F-Secure Internet Security Xirfadaha la xiriira